Siiqqee Dhugaatiin (2012/05/27)
“Ana hiite malee, kaayyoo koo hidhuu hin dandeessu!” kan jedhu sagalee shamarran Oromiyaa ti. Sagalee akkanaa kana dachee Oromiyaa keessaa dhagayuun, haraan tana waan nama raajuu miti. Namni waan Oromoon itti jiru hin beekne, tarii, “kun maal?” jedhee gaafachuu mala ta’a. Haata’uutii, kanneen waan naannoo isaaniitti ta’aa jiru beekuuf yaalii godhan, waan biyyi Oromoo, Oromiyaan, keessatti argamu beekuuf yeroo hedduu isaanitti hin fudhatu.